अमेरिकामा संचार | USAHello | USAHello
संचार हामी अन्य व्यक्तिसँग जानकारी र विचारहरू साझेदारी कसरी. हामी बोल्न गरेर के, लेखन द्वारा, र पनि हाम्रो हातमा, अनुहार, र शरीर. नयाँ देशमा, हामी सञ्चार नयाँ तरिका सिक्नुपर्छ. यहाँ तपाईँले संयुक्त राज्य अमेरिका मा संवाद गर्न मद्दत गर्न केही सुझाव छन्.
संयुक्त राज्य अमेरिका मा आफ्नो पहिलो महिनामा, तपाईं मान्छे र परिस्थिति बुझ्न बेला त्यहाँ धेरै पटक हुनेछ. यो धेरै गाह्रो छ, तर यो पनि सामान्य छ. प्रयास निरुत्साहित गर्न! संचार समय राम्रा हुनेछ. तपाईं नयाँ संस्कृति प्रयोग प्राप्त र भाषा बुझ्न सुरु हुनेछ.
जब तपाईं एक नयाँ देश मा आइपुग्दा, भाषा जान्नु छैन सबै गाह्रो बनाउँछ. यहाँ अमेरिकी सञ्चार बारेमा जान्न केही उपयोगी कुराहरू छन्.
पहिलो धेरै महिनामा तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा छन्, तपाईं शायद कुराहरू धेरै गलत अर्थ लाउनु हुनेछ. यो आफ्नो दोष सामान्य छ र. सकारात्मक हुन आफ्नो सर्वश्रेष्ठ प्रयास - कसैले अशिष्ट देखिन्छ भने वा अर्थ, यो किनभने एक सांस्कृतिक भिन्नता को हुन सक्छ भनेर आफैलाई सम्झाउन. तिनीहरूले खराब वा अशिष्ट व्यक्ति हुन् मान छैन.
• तिनीहरूले हुन सक्छ “राजनीतिक सही।” मान्छे को एक विशेष समूह अपमान हुनेछ भनेर कुरा भन्न छैन प्रयास राजनीतिक सही हालतमा रहेको. जस्तै, धेरै अमेरिकी सजीव वा sexist Jokes सहनु छैन. यो विशुद्धता एक समावेशी समाज सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ. अरूलाई अनादर गर्ने हो भने तर यो समस्या उत्पन्न हुनेछ.
त्यहाँ कुरा गर्न सजिलो छ कि केहि विषयहरू एक संचार समस्या बिना छन्. संस्कृति मार्फत साधारण क्षेत्रमा बच्चाहरु र खेल हो. तपाईं कसैसँग कुरा कठिन समय भइरहेको छ भने, यी विषयहरू कुरा!
सबैभन्दा अमेरिकी कुरा हुनेछ “सानो कुरा” तिमीसँग. तिनीहरूले तपाईं कसरी सोध्न वा मौसम कुरा हुनेछ. यो भद्र मानिन्छ. यदि कसैले भन्छ, “तिमीलाई कस्तो छ?” अन्य व्यक्ति लगभग सधैं भन्छन्,”राम्रो,” “ठीक,” वा “ठिक छ,” उसले दुःखी वा unwell पनि.
सिक्ने अंग्रेजी तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा जीवन समायोजन तपाईंलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू एउटै हो. यदि तपाईं धेरै अंग्रेजी बोल्न छैन, तपाईं नि: शुल्क कक्षाहरू अनलाइन र आफ्नो समुदायमा पाउन सक्नुहुन्छ. तपाईं तरिकामा पाउन सक्नुहुन्छ अनलाइन अंग्रेजी सिक्न वा आफ्नो स्थानीय समुदायमा.
नयाँ भाषा सिक्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका को एक यो डुबाउनुहोस् र धेरै यो सुन्न छ. सुन्न र धेरै गर्न सक्छन् तपाईं रूपमा अंग्रेजी अभ्यास गर्ने प्रयास. उच्चारण, वा कुरा सही भन्दै, नयाँ भाषा सिक्ने को सबै भन्दा कठिन भागहरु मध्ये एक छ. आफ्नो स्वर र कुन शब्द तपाईं कुरा पनि जोड. तपाईं केहि सही भन्दै हुनुहुन्छ किनभने तपाईं निराश महसुस हुन सक्छ, तर अमेरिका तपाईं बुझ्न सक्दैन. सबै अमेरिका विदेशी महत्तव प्रयोग गरिन्छ छैन.
जब हामी अन्य व्यक्तिसँग कुराकानी छन्, हामी दुई महत्त्वपूर्ण तरिकामा कुराकानी: verbally (शब्दहरू प्रयोग) र nonverbally. अशाब्दिक संप्रेषण हामी कुराकानी गर्न हाम्रो शरीर प्रयोग बाटो अर्थ. यसलाई समावेश:
मुद्रा (हामी कसरी खडा वा बस्न)
सबैभन्दा अमेरिका महत्त्वपूर्ण कुराकानी समयमा आँखा सम्पर्क बनाउन. तपाईं आँखा सम्पर्क गर्छन् भने, मानिसहरू झूट छन् जस्तो लाग्छ सक्छ वा केही गलत छ. सीधा आफ्नो आँखा मा हेर्न मानिसहरू अक्सर थप भरोसायोग्य ठानिन्छ, बुद्धिमान, र दयालु. तपाईं एक संस्कृति आउँछ भने जहाँ मान्छे हरेक अन्य आँखा मा हेर्न छैन, तपाईं के गर्न लागि यो धेरै गाह्रो हुन सक्छ.
Americans smilealot to be polite and to show that everything is okay. जब तपाईं कुनै नयाँ पूरा, तिनीहरूले तपाईं मुस्कान आशा.
अमेरिकी रिस वा लड्न बाहिर छैन तर्क, तर तिनीहरूले सही छन् भन्ने विश्वास किन देखाउन. बहस साधारण कुराकानीमा भाग रूपमा स्वीकार गरिएको छ, तिमी धेरै ठूलो स्वरमा बोल्ने छन् नभएसम्म (चिल्ला) वा खराब वा अशिष्ट भाषा प्रयोग. विद्यार्थीले आफ्नो शिक्षकहरू सहमत अनुमति र पनि छन् प्रोत्साहन. छोराछोरीले आमाबाबुको साथ तर्क हुन सक्छ. मजदुर आफ्नो मालिकहरुलाई नकार्न सक्छ, तर भद्रताका साथ. कहिलेकाहीं, विशेष गरी अमेरिकी राजनीतिमा, मान्छे केही गरेको हुन सक्छ भनेर धेरै तर्क!
बोलीको स्वतन्त्रता संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान सुरक्षित छ. यस कारण, अमेरिकी मिडिया अन्य देशहरूमा बारेमा मजाक सक्छ कुराहरू बारे Jokes बनाउन सक्छ. जस्तै, त्यहाँ छन् भनेर केही अमेरिकी समाचार पत्र हो “मजाक” समाचार पत्र - तिनीहरूले satirical वा हास्यास्पद छ कि समाचार लेख्न, तर साँचो छैन. जस्तै, एक अमेरिकी satirical अखबार कागज बुलाया प्याज उत्तर कोरिया को राष्ट्रपति बारेमा कथा लेखे. तिनीहरूले त्यो संसारमा सबैभन्दा सुन्दर पुरुष मतदान भएको थियो भने. उत्तर कोरिया र चीन मा केही मानिसहरू लाग्यो कथा साँचो थियो. तर कथा केवल मजाक थियो.
अमेरिकामा, केही मानिसहरू टेलिभिजनमा हास्य हेर्न मन. तिनीहरूले पनि टिभीमा वा थिएटर र क्लबहरू मा व्यावसायिक हास्य कलाकार हेर्न रुचि. कहिलेकाहीं, अमेरिकी हास्य र हास्य कलाकार आक्रमक हुन सक्छन्.
अमेरिकामा, लिखित अनुबंध र मौखिक सम्झौताहरू महत्त्वपूर्ण छन्.
मौखिक सम्झौताहरू एक समस्या कहिलेकाहीं मानिसहरूले गलत अर्थ लाउनु गर्न सक्ने छ. जस्तै, के तपाईं तिनीहरूलाई पूरा हुनेछ भनेर कसैले एक मौखिक सम्झौता बनाउन सक्छ5बजे दिन. तर, शायद तिनीहरूले गलत बुझयो र तपाईं अर्को दिन चाहनुभएको लाग्यो.
तपाईं केहि गर्न सहमत भने, यो तपाईं त या त सम्झौता पूरा वा तपाईंले तिनीहरूलाई थाहा छ तिमी सम्झौता पूरा गर्न सक्दैनौं गरौं भन्ने अमेरिकी महत्त्वपूर्ण छ. यो पनि सानो कुरा साँचो हो. जस्तै, कसैले तपाईंलाई मागेमा भोजन गर्न र तपाईंले हो भन्न, तपाईँ या त भोजन गर्न जानु पर्छ वा तपाईंले तिनीहरूलाई कल र तिनीहरूलाई बताउन तपाईं यसलाई खाजा खाने समय अघि छैन आउन सक्नुहुन्छ गर्नुपर्छ.
तपाईं एउटा सम्झौता हस्ताक्षर भने, तपाईं शायद कि सम्झौता पूरा गर्न कानुनी दायित्व छ. त्यसैले यो तपाईं ध्यान दिएर पढ्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ. करार अंग्रेजी छ भने, तपाईं यसलाई अनुवाद मदत माग्न सक्नुहुन्छ. एक सरल सम्झौता लागि, तपाईं एक मित्र अनुरोध गर्न सक्छ वा तपाईं हामीलाई इमेल र हामी तपाईँलाई सम्झौता बुझ्न मदत गर्न प्रयास गर्नेछ. यो मुद्रा सम्बन्धित छ भने, काम, वा कानुनी सेवा, तपाईं एक पेशेवर अनुवादक प्रयोग वा सल्लाह लागि आफ्नो caseworker सोध्न सक्नुहुन्छ.
छैन तथ्य - यी अमेरिकी संस्कृतिको बारेमा generalizations छन्, एक अमेरिकी तपाईं प्रयोग गरिन्छ के फरक छ कि एक तरिका अभिनय हुन सक्छ किन राम्ररी बस विचार मद्दत गर्न. बस फरक - अमेरिकी तरिका र संस्कृति अन्य तरिकामा भन्दा राम्रो वा खराब छन्.
कसरी नम्र हुनु र संयुक्त राज्य अमेरिका मा असल बेहोरा छ